tahriibid - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cabdi:"Wiilkii aan is jecleeyn ayaan ku khasbanaaday inaan ka imaado"
Filim cusub oo dhowaan lagu soo ban-dhigay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa ka hadlaya laba wiil oo soomaali ah oo uga soo baxsaday Soomaaliya khaniisnimo darteed ka dib kolkii lagu qabtay iyaga oo wada jooga.
Carwadii aflaanta afrikaanka oo la soo af jarey axaddii ina dhaaftay
Axaddii ina dhaaftay waxaa magaalada Stockholm lagu soo gabagabeeyey carwadii aflaanta Afrika ”CinemaAfrica”, middaasina oo markii ugu horreeysay lagu tallaabsaday sannadkii 1998. Waa carwada ugu wayn waddammada dhaca waqooyiga Yurub ee lagu soo ban-dhigo cinemooyinka lagu sameeyo Afrika iyo kuwa ey sameeyaan jaaliyadda ka soo jeeda ee ku dhaqan dibadaha.
Hey’adda socdaalka oo hufnaanta shaqadooda si weyn loo dhaliiley
Hey’adda socdaalka ayaa sanadkii la soo dhaafey waxay soogalootiga dalkaan ka gaartey 112 go’aan,waxaana qaar badan oo go’aamadaas ka mid ahi ahaayeen kuwa qaldan.
Madaxda EU-da oo shirkooda Malta uga tashanaya Trump iyo Libya
Shirka midowga Yurub.
Hogaamiyayaasha dalalka xubnaha ka ah ururka midowga Yurub ayaa maanta isugu imaanaya shirkoodii ugu horeeyey ee sannadkaan, kuwaas oo ku kulmaya magaalada Valetta oo ah caasimada dalka Malta.
Xisbiga(L) : waa in dalkaan laga mamnuucaa guurka dhallaanka
Hogaamiyaha xisbiga Libaraalka Jan Björklund ayaa maanta isagoo la hadlaya guddi hoosaadka baarlamaanka dalkaan u qaabilsan arrimaha bulshada ,wuxuu sheegey in baarlamaanku ka talaabsado wasiirka caddaalada dalkaan Morgan Johansson ,isla markaasna qaato, soona bandhigo sharciyo uu baarlamaanku dhaqangaliyo.
Muwaadiniinta haysata laba dhalasho oo Mareeykanka geli karta
Xeerarka cusub ee Mareeykanka.
Dawladda Mareekanka ayaa dib uga noqotay mamnuuciddii dalkeeda ay ka mamnuucday dadyoowga haysta labada dhalasho ee ka soo jeeda toddobadii dal ee horay looga mamnuucay in ay dalkaas tegi karaan.